Amaanka Madaxtooyada Hirshabelle oo la adkeeyay iyo cabsi soo food saartay Cosoble - Caasimada Online
Home Warar Amaanka Madaxtooyada Hirshabelle oo la adkeeyay iyo cabsi soo food saartay Cosoble
Amaanka Madaxtooyada Hirshabelle oo la adkeeyay iyo cabsi soo food saartay Cosoble
Jowhar (Caasimada Online) – Waxaa aad loo adkeeyay amaanka Madaxtooyada maamulka Hirshabelle kadib markii ay baqdin soo foodsaartay Hogaamiyaha maamulka.
Ciidamo ku dhow 50 ayaa lagu biiriyay ilaaladii hore ee Madaxtooyada kuwaa oo lagu daadiyay dhammaan gudaha iyo daafaha Madaxtooyada si ay u sugaan amniga Madaxtooyada.
Ciidamada ayaa is hortaagaya gaadiidka Xildhibaanada ee doonaaya inay gudaha u galaan Madaxtooyada, waxaana la sheegayaa in amarka lagu deynaayo laga dalbo Xafiiska Madaxweynaha iyo Agaasinka Madaxtooyada.
Hogaamiyaha ayaa si KMG ah u mamnuucay in Madaxtooyada ay booqasho ku imaadan tirro Xildhibaano ah kuwaa oo loo aqoonsaday inay yihiin qaswadayaal kasoo horjeeda hanaanka lagu ambaqaadayo dhismaha maamulka.
Xildhibaanada la diiday inay galaan Madaxtooyada ayaa wada abaabul Mooshin looga keenaayo Golaha Wasiirada ee shalay la ansixiyay.
Dhinaca kale, Hogaamiyaha maamulka ayaa cashar ka bartay weerarkii Bambaano ee Habeen hore lagu qaaday Madaxtooyada xili uu halkaa ku sugnaa.